Ch 1 John – 2hove
musha / Bhaibheri / Evhangeri yaJohani / Ch 1 John
1:1 Pakutanga Shoko rakanga, uye Shoko rakanga riri kuna Mwari, uye Mwari aiva Shoko.
1:2 Iye aiva kuna Mwari kubva pakutanga.
1:3 Zvinhu zvose zvakaitwa kubudikidza naye, uye chinhu chakaitwa chakaitwa pasina Him.
1:4 Upenyu hwaiva maAri, uye upenyu ihwohwo hwaiva chiedza chevanhu.
1:5 Uye chiedza chinovhenekera murima, asi rima harina kuchikunda.
1:6 Pakanga pano murume akatumwa naMwari, ainzi John.
1:7 Iye akasvika sechapupu kupa uchapupu pamusoro Light, zvekuti vose kuti vatende kubudikidza naye.
1:8 Akanga asiri iye chiedza, asi aifanira kupa uchapupu pamusoro Light.
1:9 Chiedza chechokwadi, izvo chinovhenekera munhu umwe neumwe, chainge chichizouya ino.
1:10 Akanga ari munyika, uye nyika yakaitwa kubudikidza naye, uye nyika haina kumuziva.
1:11 Akaenda kune zvake, uye vokwake havana kumugamuchira.
1:12 Asi ani akaita amugamuchire, avo vakatenda muzita rake, akavapa simba rokuti vave vana vaMwari.
1:13 Ava ndivo vakaberekerwa, kwete ropa, kana nokuda kwenyama, kana nechido chemurume, asi Mwari.
1:14 Shoko rakava nyama, uye iye akagara pakati pedu, uye takaona kubwinya kwake, kubwinya kwakaita mwanakomana akaberekwa ari mumwe oga kubva Baba, azere nenyasha uye nechokwadi.
1:15 John rinopa uchapupu nezvake, iye anodanidzira, vachiti: "Uyu ndiye uya wandakati nezvake: 'Uyo ari kunditevera, akaiswa mberi kwangu, nokuti akavapo pamberi pangu. ' "
1:16 Uye kubva pakuzara kwake, takagamuchira, kunyange nyasha nyasha.
1:17 Nokuti murayiro wakapiwa zvazvo Mosesi, asi nyasha nezvokwadi zvakauya kubudikidza naJesu Kristu.
1:18 Hakuna akamboona Mwari; Mwanakomana akaberekwa ari mumwe oga, ari pachipfuva chaBaba, iye arondedzera iye.
1:19 And this is the testimony of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to him, so that they might ask him, "Ndiwe ani?"
1:21 Vakamubvunza: “Then what are you? Are you Elijah?"Akati, “I am not.” “Are you the Prophet?"Akapindura, “No.”
1:22 saka, vakati kwaari: "Ndiwe ani, so that we may give an answer to those who sent us? What do you say about yourself?"
1:23 Akati, “I am a voice crying out in the desert, ‘Make straight the way of the Lord,’ just as the prophet Isaiah said.”
1:28 These things happened in Bethania, mhiri kwaJodhani, where John was baptizing.
1:29 Pazuva rakatevera, John saw Jesus coming toward him, uye saka akati: "Tarirai, Gwayana raMwari. tarirai, he who takes away the sin of the world.
1:32 And John offered testimony, vachiti: “For I saw the Spirit descending from heaven like a dove; and he remained upon him.
1:34 Uye ndakaona, and I gave testimony: that this one is the Son of God.”
1:35 Zuva rakatevera zvakare, Johani akanga akamirazve aine vaviri vevadzidzi vake.
1:36 Uye paakaona Jesu achipfuura, akati, "Tarirai, Gwayana raMwari. "
1:37 Vadzidzi vaviri vakanga vachimuteerera achitaura. Uye vakatevera Jesu.
1:38 Zvino Jesu, atendeuka akatarira pavo vaimutevera, akati kwavari, "Uri kutsvaka?"Ivo vakati kwaari, "Rabhi (izvo zvinoreva mushanduro, mudzidzisi), unogara kupi?"
1:39 Akati kwavari, "Uya uone." Ivo vakaenda, vakaona kwaakanga achigara, uye vakagara naye zuva iroro. Zvino yakanga iri nguva inenge yegumi.
1:40 And Andrew, munun'una waPetro, aiva mumwe vaviri akanga anzwa kubva John uye vakanga vamutevera.
1:41 Chekutanga, akawana Simon mukoma wake, uye akati kwaari, "Tawana Mesiya," (ndiko sezvo Kristu).
1:42 Iye akaenda naye kuna Jesu. Jesu, akanyatsomutarira naye, akati: "Ndiwe Simoni, mwanakomana waJona. Iwe uchanzi Kefasi," (iro rinoshandurwa sezvo Peter).
1:43 Pazuva rakatevera, aida kuenda kuGarirea, uye akawana Firipi. Zvino Jesu akati kwaari, "Nditevere."
1:44 Zvino Firipi wakange ari weBhetisaidha, guta raAndiriyasi naPetro.
1:45 Firipi akawana Natanieri, uye akati kwaari, "Tamuwana uya nezvake akanyora naMozisi muMurayiro naVaprofita: Jesu, mwanakomana waJosefa, weNazareta. "
1:46 Nataniyeri ndokuti kwaari, "Pane chinhu chakanaka kubva kuNazareta?"Firipi akati kwaari, "Uya uone."
1:47 Jesu wakaona Nataniyeri achiuya kwaari, akati nezvake, "Tarirai, muIsraeri uyo zvechokwadi hapana kunyengera. "
1:48 Nataniyeri ndokuti kwaari, "Unoziva ini kupi?"Jesu akapindura akati kwaari, "Usati Philip akudana, kana uri pasi pomuonde, Ndakuona. "
1:49 Nataniyeri akapindura ndokuti kwaari: "Rabhi, iwe uri Mwanakomana waMwari. Ndimi Mambo weIsraeri. "
1:50 Jesu akapindura akati kwaari: "Nokuti ndakuudza kuti ndakuona uri pasi pomuonde, imi munotenda. zvinhu zvikuru kupfuura izvi, uchaona."
1:51 Akati kwaari, "Amen, ameni, Ndinoti kwamuri, muchaona denga rakazaruka, uye vatumwa vaMwari vachikwira nokuburuka pamusoro poMwanakomana woMunhu. "
Gunyana 23, 2019